बैंक मर्ज गरेर लगानी योग्य पुँजी बढ्ने होइन « Artha Path
बैंक मर्ज गरेर लगानी योग्य पुँजी बढ्ने होइन
जनक शर्मा पौडेल, सिईओ, सनराइज बैंक लि
स्वतफुर्त रुपमा मर्ज हुनु राम्रो हो तर फोर्स मर्जर गलत हो ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा परिचित नाम हो जनक शर्मा पौडेल । विगत ५ महिनादेखी सनराइज बैंकको सिईओ रहेका पौडेल बजारको बारेमा अध्यायन गर्ने सिईओ हुन । बेलायतको बाग्लेज बैंकमा समेत काम गरेका पौडेल केही समय अघि ग्लोवल आईएमई बैंकको सिईओ रहेका थिए । नेपालमा र विदेशमा समेत गरी ३२ वर्ष बैंकिङमा विताएका उनि पछिल्लो समय बैंकहरु व्यापक साखा विस्तारमा लागेका छन । यसै क्रममा सनराइज बैंकले देशव्यापी आफ्नो साखा विस्तारको तयारी गरेको छ । सनराइज बैंक । अहिलेको बैंकिङ बजारको सन्र्दभमो गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ः–
सनराइज बैंकको वित्तिय अवस्था कस्तो छ ?
सनराइज बैंकको वित्तिय अवस्था राम्रो छ । आजको दिनमा ८५ अर्वको डिपोजिट, ७५ अर्व कर्जा प्रवाह गर्न सफल भएका छौं । भर्खरै मात्र बैंकले ३ अर्वको डिभेञ्चर निस्कासन गरेर सफल रुपमा विक्री पनि गरिसकेका छौं ।
तपाई सिईओ भएर यस बैंकको नेतृत्व लिनुभएको ५ महिना भयो । के के सुधार गर्नुभयो ?
दैनिक गरिने सुधारहरु त प्रसस्त छन । बैंकको वेष्ट गर्भनेन्स र कर्पोरेट कल्चर राम्रो भएको बैंक हो । अहिले मेरो फोकस बैंकको विजनेशको लागी साखा सञ्जाल विस्तार गर्नेतिर लागेको छु । बैंक अहिले रिटेल एसएमईमा फोकस भएको हिसावले साखा सञ्जाल हुनुपर्छ । ग्राहाकहरुलाई दिनानुदिन सेवा चाहिरकेका छन । सवैसाधारणले सनराइज बैंकलाई विश्वार गरेकाले विभिन्न शहरमा साखाको डिमाण्ड धेरै छ । त्यै भएर हामीले यो आवमा २५ ओटा साखा विस्तारको निती लिएका छौं । जसमा ५/६ ओटा खोलिसक्यौं । साखारहित बैंकिङ सेवा पनि सय पु¥याउने भन्ने हिसावले लागेका छौं ।
डिजिटल बैंकिङमा जाने निती सँगै तिब्र साखा विस्तार गर्दा भोली समस्या आउँदैन ?
पुलफ्जेटमा डिजिटल आप पव्लिकमा पुग्न केही समय त लागिहाल्छ । डिजिटल बैंकिङमा हामी बामे सर्दै छौं । अहिले त्यसको स्पिड बढ्दो छ । अहिले बहुमत कष्टमर म्यानुअल्ली ट्रान्जेक्सनमै रमाइरहेका छन भने युवाहरु मोवाइल एपबाटै सबै सुविधा उपयोग गरिरहेका छन । आजको दिनमा अझै २५ जिल्लामा फाइवरको सुविधा छैन । डिजिटल सर्भिस देशभरी कसरी हुन्छ । हामी हाम्रा ग्राहाकहरुलाई डिजिटल्ली सेवा दिने हिसावले अगाडी बढेका छौं ।
सनराइज बैंकले कति साखा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ?
साखा यति पु¥याउनुपर्छ भन्ने हिसावले म होडवाजीमा लाग्दिन । साखाको नंबरले विजनेशमा केही तात्विक अर्थ राख्छ जस्तो लाग्दैन । एउटा कल्चर र भ्याजुबेस बैंकिङ गर्नुपर्छ । बैंकिङ आफैमा संवेदनशिल उद्योग हो । पव्लिकको डिपोजिट चलाएर विजनेश गर्नुपर्ने भएकाले बैंकिङ च्यालेन्ज क्षेत्र हो ।
आगामी आइतबार रसुवा र सोमबार नुवाकोटको साखा विस्तारको प्लान बनाउनुभएको छ । नुवाकोट रसुवामा कस्ता व्यापारको संभावना देख्नुभएको छ ?
काठमाडौंबाट नजिक रहेर पनि नुवाकोट रसुवामा हाम्रो बैंकको साखा थिएन । रसुवा नुवाकोटका यस बैंकलाई माया गर्ने ग्राहाकहरुले पनि यस क्षेत्रमा सनराइज बैंक आइदिन गरेको आग्रहको आधारमा रसुवाको टिमुरे र नुवाकोटको बट्टारमा साखा विस्तारको अन्तिम तयारीमा छौं । हामी अर्को साताको पहिलो हप्तानै हामीले त्यहाँका साखा सञ्चालनको तयारी गरेका छौं । नेपालको चिनसँगको कनेक्टीभिटीको हिसावले केरुङ मुख्या नाका हुने संभावना छ । केरुङ हुँदै रेल मार्ग बन्ने कुरा पनि चलेको छ । नुवाकोट रसुवा व्यापारिक हिसावले केन्द्र बन्दै छ । त्यहाका ग्राहाकले सनराइज बैंकको अत्यधुनिक सेवा सहजै पाउनेछन ।
कस्तो संभावना छ रसुवा नुवाकोटमा बैंकको लगानीको लागी ?
हाम्रा साखाहरु पुर्ण सेवायुक्त साखा हुनेछन । बट्टार त आफैमा व्यापारिक केन्द्र भैहाल्यो त्यसको अलावा नुवाकोट हुँदै रसुवाको लाङटाङ जाने विदेशी पर्यटकहरु प्रसस्तै हुन्छन । पर्यटकीय हिसावले महत्वपुर्ण मानियको रसुवा क्षेत्रमा विदेशी मुद्राको कारोवारको सिवावले पनि राम्रो छ । रसुवामा जडिबुटीको पनि प्रसस्त संभावना भएकाले व्यापारिक सिवावले पनि यी क्षेत्र महत्वपुर्ण मानिन्छ । रसुवा नुवाकोटले चिनसँग व्यापारिक हिसावले धेरै लाभ लिन सक्छ । यस क्षेत्रमा सनराइज बैंकको पनि कनेक्टीभिटी बढाउन साखा विस्तार गरेका हौं ।
बैंकहरुमा लगानी योग्य पुँजीको अभावमा कर्जा रोकेका छन भनिन्छ नि ?
कर्जा रोकिएको छैन तर अत्यधिक मागलाई पुर्ण पुर्ती गर्न सकेको अवस्था छैन । बैंकहरुको पुँजीकृत भए त्यसको आधारमा डिपोजिट बढ्न सकेन । आजको दिनमा क्रेडिट डिमाण्ड बढ्दो छ । राम्रो प्रोजेक्टको लागी बैंकहरुले लगानी गरिरहेका नै छन । आजको दिनमा बैंकहरुसँग १०÷१२ खर्वको क्रेडिक क्रियसन गर्न सक्ने क्षमता बैंकहरुसंग छ । त्यसलाई परिपुर्ती गर्नको लागी डिपोजिटको स्रोत हामीसँग प्रयाप्त छैन ।
पहिलो तैमासमा बैंकहरुको नाफा घटेको देखियो नि ?
अघिल्लो आवमा क्रेडिक क्रञ्चले बैंकहरुलाई टाइट गर्दै लग्यो । गत वर्ष आधा आधीमै बैंकहरुले लगानी गर्न सक्ने अवस्था बैंकहरुमा थिएन । साना तिन बाहेक ठुला कर्जा प्रवाह गर्न सकेनन् ।
नेपालमा बैंकको संख्या धेरै भयो भनेर राष्ट्र बैंकले मर्जर पोलिसि पनि ल्यायो । के बैंकको संख्या धेरै भएकाले अस्वस्थ्य प्रतिस्प्रर्धा बढेको हो ?
नेपालको जनसंख्या र अर्थतन्त्रको साइजलाई हेर्ने हो भने बैंकको संख्या बढी नै हो । फुल स्केलको थोरै बैंक भए पनि पुग्छ । संख्या यती नै भनेर किटान गर्न सकिँदैन । बेलायतमा हाम्रो भन्दा ठुलो अर्थतन्त्र छ त्यहाँ ४ ओटामात्रै बैंक छ । त्यहाँ एउटा बैंकको लाख साखा पुगेका छन । यो त लाइसेन्स दिने बेलामा नै सोच्नुपर्ने कुरा हो । बैंक मर्ज गरेर लगानी योग्य पुँजी बढ्ने होइन । स्वतफुर्त रुपमा मर्ज हुनु राम्रो हो । फोर्स मर्जर गर्न लगाउनु गलत हो ।
सनराइज बैंक मर्जरमा जान्छ ?
सनराइज बैंकले मर्जरमा जाने कुनै सोच राखेको छैन । मर्जरको लागी उपयुक्त ग्रुप हाम्रो सोचाइ भिजन मिल्ने पार्टनर भयो भने मर्ज हुनै सक्दैन भन्ने छैन । मर्जर हुनुपर्ने हो भने बैंकको पुँजी २ अर्वबाट ८ अर्व पु¥याउने बेलामै सोच्नुपथ्र्र्यो । त्यस्तो हुँदा बैंकको संख्या आफै घट्थ्र्यो ।
अव सनराइज बैंकलाई कहाँ पु¥याउने प्लान छ ?
मेरो कार्यकालमा सनराइज बैंकलाई टपटेन बैंकमा ल्याउँछौं । सूचनाको पहुँचको आधारमा पहिलो बैंक हो । विभिन्न प्यारामिटरर्सलाई हेर्दा सनराइज बैंक माथी छ । मुख्य कुरा कष्टमरको विश्वास जित्ने हो ।